यसरी शुरु गरौं नयाँ शैक्षिक सत्र – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
यसरी शुरु गरौं नयाँ शैक्षिक सत्र
२९ श्रावण २०७७, बिहीबार education, शैक्षिक सत्र
दार्शनिक माइल्स डेभिसले भनेका छन्, ‘समय संसारको सवभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होईन, यो त एक मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा हो’ । समयको महत्त्वलाई बुझ्ने मानिसले मात्र मात्र जीवनमा सफलता प्राप्त गरेका छन् । समयमा काम गर्ने, सुत्ने, उठ्ने, खाने, अध्ययन गर्ने मानिस सफल हुन्छ । उ धनी हुन्छ । उ सम्पन्न हुन्छ । बुद्दिमानी हुन्छ र स्वस्थ हुन्छ । उसले आफ्नो, समाजको र राष्ट्रको लागि केही न केही गरिरहेको हुन्छ ।
हामी अहिले कोभिड–१९ को महामारीमा छौं । विश्वभर २ करोड माथि मानिसहरु संक्रमित भएका छन् । दैनिक लाखौं थपिएका छन् । झण्डै ७ लाख भन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् विश्वभर । त्यस्तै हाम्रो देशले पनि ९७ जना गुमाएको छ भने २३ हजार संक्रमित भएका छन् । तीस लाख मानिसले प्रत्येक्ष रोजगारी हाललाई गुमाएको अवस्था छ । यो भन्दा दुखको कुरा हाम्रा बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् ।
उनीहरूको पठन–पाठन एक किसिमले रोकिएको छ यद्यपि ३० प्रतिशत बालबालिकाले भर्चुअल कक्षा लिँदै छन् । भर्चुअल कक्षा पढ्नेहरु पनि त्यति राम्रो मोटिभेटेड भएका छैनन् । यिनका अभिभावकलाई अनलाइन कक्षाले केहि फाइदा पुर्याउछ भन्ने लागेको छैन । सामुदायिक विद्यालयले अपवाद बाहेक पुस्तक मात्र बाँडेका छन् । त्यहाँका शिक्षक कर्मचारी घरमा छन् । उनीहरूको खातामा तलव सुविधा जम्मा भईरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा स्वर पनि ठूलो छ । उनीहरु स्वस्थ्थ खाना पेटभरि खाएका छन् बलिया पनि छन् ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीको भविष्यको चिन्ता गरेका छन् । सके सम्म विद्यार्थीलाई भर्चुअल कक्षा मार्फत पढाइ पनि रहेका छन् । एकाध विद्यालय सञ्चालकले आफ्नो गहना डिपोजिट गरेर वा सहकारीबाट ऋण लिएर केही शिक्षकलाई सामान्य खर्च चल्ने गरि तलव दिने प्रयास गरेका त छन् अब गहना पनि छैन, ऋण लिने ठाउँ पनि छैन । अभिभावकहरु शुल्क तिर्न विद्यालय गएका छैनन् । कर्पोरेट विद्यालयहरुलाई छाड्ने हो भने झण्डै ८० प्रतिशत विद्यालय स्वरोजगारमुखी स्वतन्त्र विद्यालय हुन् जुन शिक्षकहरुद्वारा सञ्चालित विद्यालय हुन् । ती अध्ययन गरेका राष्ट्रले हैसियत क्षमता र योग्यता अनुसार रोजगारी दिनु पर्ने जनशक्ति हुन् ।
उनीहरु आफ्नो लगानीमा स्वरोजगार भई रहेका छन् त कसरी गलत गरेका छन् ? यो प्रश्नको उत्तर मानिसहरुसँग छैन जसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय विरुद्ध तितो पोख्छन् । ती कर्मचारी र मन्त्रीलाई थाहा हुनु पर्ने हो राज्यको जिम्मेवारी के हो ? १२–१५ प्रतिशतमा रहेका महँगा विद्यालयलाई हेरेर सम्पूर्ण निजी विद्यालय कर्पोरेट नै हुन् भनेर बुझ्नु जस्तो मुर्खता के हुन्छ यो संसारमा ।
अर्को पक्ष विद्यार्थी हुन् । उनीहरु अहिले सामाजिक सञ्जालमा रमाएका छन् । पव जी, फ्रि फाएरलगायत मानसिक सन्तुलन गुमाउन सकिने मोवाइल गेमहरु खेलेर विद्यार्थीहरुले आफ्नो बानी बिगारि रहेका छन् । एउटा खराब लत बसि सके पछि त्यो लतबाट छुटाउन बडो मुस्किल हुन्छ । मानिसले यो बुझेका छैनन् । कि समय महत्त्वपूर्ण छ । जीवनको तालिका बिग्रए पछि तीन पुस्ता बिग्रन्छ । सधैं दमित र कमजोर भएर बाँच्नु पर्नेछ । हाम्रा वालवालिकाको जीवन तालिका नबिगार्ने हो भने सरकार, अभिभावक र समाजले केही न केही त्याग त गर्नै पर्छ । निजी विद्यालयले गरेका राम्रो शुरुवातलाई सहयोग गर्नै पर्छ ।
शुल्क नतिरी निजी विद्यालयले पढाउन सक्छ भनेर बुझ्नु पुर्णतया गलत र भ्रम मात्र हुन्छ । समय यति महत्त्वपूर्ण छ जुन हामीले व्याख्या गर्न सक्दैनौं महसुस मात्र गर्न सक्छौं । स्वास्थ बचाएर पनि विद्यार्थीको समय बचाउन सकिन्छ । त्याग त हुन पर्छ–पर्छः विना त्याग मानिसको अपेक्षा दिवा सपना मात्र हो । विलियम पेनले भनेका छन्, ‘हामीले सबैभन्दा धेरै चाहने चिज समय हो, त्यसैगरि सबैभन्दा दुरुपयोग गर्ने पनि समय नै हो’, अनि बन्ने हो जीवन असफल । जसले समय बुझ्दैन र बुझेर पनि सदुपयोग गर्दैन उ असफल हुन्छ, हुन्छ । अतः अझै बिग्रि सकेको छैन । राज्यले एउटा घोषणा गर्नै पर्छ ।
राज्यले सबैलाई बिगार्नु भन्दा धेरैलाई बचाउनु बुद्दिमानी हुन्छ । सामुदायिक वा निजी सबैलाई भर्चुअल कक्षाका लागि आब्हान गर्नु पर्छ । विश्वमा भ्याक्सिनको जुन प्रयास भई रहेको छ यसले एकातिर शुभ संकेत गरेको छ अवको ३ वा ४ महिनामा हामीले भ्याक्सिन पाउन सक्छौं । त्यसो हो भने त्यति समयका लागि एउटा र अर्को बाँकि समयका लागि अर्को योजना बनाएर राज्यले घोषणा गरोस् । आज भाद्र शुरु हुँदैछ । भदौ १ देखि ७ कडा निगरानीमा राखौं । भदौ ७–२० भर्ना गर्ने र नाम दर्ता गर्ने गर्न भनौं । साथसाथै, भदौ १५ बाट शैक्षिकसत्र गणना गरौं, अनिवार्य भर्चुअल कक्षा भनौं ।
छुट्न सक्ने २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई दोस्रो चरणमा डवल कक्षा लिएर परिपुर्ति गर्ने योजना बनाऔं । भर्चुअल कक्षा शैक्षिकसत्रको गणनामा जोडौं । यद्यपि मानिसको समस्या बुझेर भर्ना, नविकरण मंसिर सम्म जारि राखौं । दोस्रो चरणको कार्यक्रम संसारमा भ्याक्सिनको अवस्था हेरेर नोभेम्वर १५ वा डिसेम्बर १५ कायम गरेर, प्रत्यक्ष कक्षा व्यवस्थापन शुरु गरौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन र बैज्ञानिक समेतले भनेका छन् कि, अझै केही वर्ष हुनसक्छ २–३ वर्ष, यो भाइरसको सामान्य प्रभाव रहने नै छ ।
अतः यसबाट जोगिने एक मात्र उपाय भौतिक दुरी, मास्कको सहि प्रयोग, सरसफाइ, हातखुट्टा धोईराख्ने र सचेत जीवन पद्धति नै हो । त्यसो भई सकेपछि बालबालिकाको मात्र होईन राष्ट्रको गुणस्तरीय जनशक्ति प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई किन मार्ने ?
अब मानव जातीले कोभिड जस्तो महामारीलाई चुनौति दिएर दैनिक जीवन पद्धति त अगाडि बढाउनु नै छ । र अति आबश्यक पनि भई सक्यो । यहि आधारमा कलेज र विश्वविद्यालयहरु पनि निरन्तरताको आवश्यकता भई नै सक्यो । सरकारले कानको ढकनी र आँखाको पर्दा खोलेर सहि नेतृत्व दिन ढिला गर्नु गलत हुनेछ । सचेतनापुर्ण निर्णय आजै गरौं । विद्यालयमा जोडौं, आव्हान गरि हालौं ।
(लेखक नेपाली काँग्रेसको संघिय मामिला तथा प्रदेश समन्वय केन्द्रीय विभागको सदस्य तथा शिक्षाविद् हुन् ।)